အိပ်မက်တစ်ခုနဲ့ ကျွန်တော်: February 2012
My Favorited Girl singing " All I need to survive " with fully explosion emotional talent.
Posted by ကိုသက်ဝင်း at 2:03 PM No comments:
Posted by ကိုသက်ဝင်း at 7:13 PM 1 comment:
ကျွန်တော် စက်မှုတက္ကသိုလ်ကို ပထမနှစ်အနေနဲ့ တောင်ငူကနေ ရန်ကုန် ကို ရထားနဲ့ထွက်မယ့်အချိန်....
ချစ်လှစွာသော သူငယ်ချင်း အောင်နိုင်ဦးက ဘူတာကို အပြေးအလွှား လာရောက်ပြီးတော့ ရန်ကုန်မှာ သုံးဘို့အတွက် ဆိုပြီး ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တစ်လုံးနဲ့ အပြည့် လာပေးရှာတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတော့...... မား လို့ခေါ်တဲ့ ဆေးခြောက်တွေ....
ကျွန်တော့မှာ ဘုရားမျိုးစုံ တ လိုက်ရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘူတာကို အဖေနဲ့တကွ အဖေ့ရဲ့ တပည့်အပေါင်းက လိုက်ပို့ကြတာကိုး။ သိကြတော်မူတဲ့အတိုင်း အဖေက အဲဒီတုန်းက တောင်ငူက မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး။ အဖေများ မိလိုက်လို့ကတော့......... သားလည်း ရှောင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ထောင်ထဲ တန်းပို့မှာ။
အဖေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး တစ်ခုပြောစရာရှိတယ်။ ကျွန်တော် ၁၀ တန်း ပထမနှစ် ဖြေပြီးတဲ့အချိန်။ အဲဒီတုန်းက ခေတ်စားတဲ့ Million5တို့ Billion5တို့ကို ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းသုံးတတ်နေပြီ။ ညနေကျရင် မန္တလေး ဘီယာလေးလည်း စုပ်တတ်နေပြီ။ ဘီယာက တစ်ပုလင်းကို ၅၀။ မုန့်ဘိုးက တစ်ရက်စာလို့ မရှိဘူး၊ ကြုံရင်ကြုံသလိုတောင်းတာက အများဆုံးမှ ၅၀ တည်းရယ်။ ဘယ်လိုမှ မှီဝဲဘို့မလွယ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်ရယ်၊ စခန်းမှူးသားရယ်၊ ဒုရဲအုပ်တစ်ယောက်ရဲ့သားရယ်၊ အရပ်ထဲက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရယ် စုပြီးတော့ ဗီဒီယို တစ်ရုံကို လေလံစွဲတယ်။ တစ်ရက်ကို ၄၀၀ နဲ့။ အက်ရှင်ကားတို့ သိုင်းကားတို့ ကုလားကားတို့တွေကို နေ့လည်ပိုင်းပြပြီးတော့ ညပိုင်းကျတော့ လူကြီးကားကို ခိုးပြကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့လေလံစွဲတာက ၅ ရက်။ ၂ ရက်မြောက်နေ့မှာ အဖေ သတင်းရသွားလို့ ကျွန်တော့ကို သူ့ ရုံးခန်းထဲ ခေါ်ပြောတယ်။ အခုချက်ခြင်းရပ်တဲ့။
ကျွန်တော်တို့မှာလည်း ပိုက်ဆံကပေးပြီးသားဆိုတော့ မထူးဘူးဆိုပြီး ဆက်ပြတယ်။ ၃ ရက်မြောက်ညမှာ အိမ်ကို ညပွဲပြပြီးတော့ ခိုးပြန်လာတော့ အဖေက အိမ်ရှေ့နားက သူ့အလုပ်စားပွဲမှာ အလုပ်လုပ်တုန်း။ အဖေက " ဟေ့ကောင် မင်း အဲဒီမှာ ရပ်နေ " ဆိုပြီး ပြောတော့ ကျွန်တော် လှေကားထစ်အပေါ်လေးနားမှာ ရပ်နေရတာပေါ့။ အဖေက သူ့အလုပ်တွေ လက်စသပ်ပြီး ကျွန်တော့ဆီ လျှောက်လာပြီး လက်သီးနဲ့ ထိုးထည့်လိုက်တာ ကျွန်တော် လှေကား ၃ ထစ်ကနေ ဂျွမ်းပြန်ကျသွားပါလေရော။ အိမ်မှ အမေကော ညီအကို မောင်နှမတွေကကော ဘယ်သူမှာ လာမထူရဲဘူး။ မှတ်မှတ်ရရ အဖေဆုံးမခဲ့တာ အဲဒီတစ်ခါတည်းနဲ့ ကျွန်တော် အီစလန်ဝေသွားတာ။ ကျွန်တော့အဖေက အဲဒီလိုမျိုး။
အင်း ခုနက စာကို ဆက်ရရင်....
ကျွန်တော်ခုနက အထုပ်ကို အဖေ မသိအောင် သေသေချာချာ သံသေတ္တာထဲထည့်၊ ပြီးတော့မှ ရထားကြီးစီးပြီး ရန်ကုန်ကို ရောက်လာတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ။
ရန်ကုန်မှာ ကျွန်တော်နေရတာက ဒူးယားဆောင်၊ အဲဒီအဆောင်က ကျွန်တော့အတွက် မစိမ်းဘူးဗျ။ ကျွန်တော် ကျောင်းမတက်ခင်ကတည်းက ကျွန်တော့ အကိုဝမ်းကွဲတစ်ယောက် ဒူးယားသားဆိုတော့ ရောက်ဘူးပြီးသား။ အဲဒီက ဟောကျုတာ ဆရာ ဦးမြင့်ကြွယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်နဲ့က ဟိုးတုန်းကတည်းက ခင်မင်ပြီးသား (ရိုးရိုးသားသား ခင်တာပါ အဲဒီတုန်းကတည်းက)။ ဘာလို့ ရှင်းပြနေရသလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆရာက ကျွန်တော်တို့ စက်မှုတက္ကသိုလ်မှာ အမေကြွယ်လို့ ကျော်ကြားသူတစ်ယောက်မို့ အဲဒီလို ရှင်းပြနေရတာ။ သူ့ကိုယ်သူ အမြဲကြွေးကျော်နေလေ့ရှိတာက တောင်ဘက်လှည်းတန်းကနေ မြောက်ပိုင်း အင်းစိန်အထိ ပိုင်သတဲ့ အမေ ပါတဲ့။
ပထမနှစ် အူကြောင်ကျား လို့ပြောရမယ့်အရွယ်မှာ ကျွန်တော်က အတတ်ပညာ အဌာရသ အပြည့်အစုံနဲ့ ရွှေကျောင်းတော်ကြီးကို ရောက်လာတယ်ပဲ ဆိုပါတော့။ ကျွန်တော်နဲ့ အခန်းဖော် ဖြစ်မယ့် ငတိက ဖြူးမှာတုန်းက အတန်းဖော် ၀ဏ္ဏကျော်.. သူက အဆောင်ရပေမယ့် လာမနေတော့ ကျွန်တော်က တစ်ယောက်ခန်းလို အခန့်သားနေရတာပေါ့ဗျာ။
တစ်ယောက်ခန်းဆိုတော့ ဖဲရိုက်လည်း ကျွန်တော့အခန်း။ ဆေးချတော့လည်း ကျွန်တော့ အခန်း။ အရက်သောက်တော့လည်း ကျွန်တော့ အခန်း။ ပြောရရင် တော်တော် စည်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်က အဖြူတော့ လုံးဝ မလုပ်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော့် မျက်စေ့ရှေ့မှာ အဖြူစွဲပြီး ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့လူတွေကို အနီးကပ် တွေ့ဘူးခဲ့တော့ အဖြူကိုတော့ လုံးဝ ရှောင်တယ်။ ဆေးခြောက်ကိုတော့ စရောက်ရောက်ခြင်းလောက်ပဲ သုံးဖြစ်တယ်။ နောက်ပိုင်း မသုံးဖြစ်တော့ဘူး။ ကိုယ့်နယ် မဟုတ်တော့ ကြောက်တာလည်းပါတာပေါ့ဗျာ။ ပထမနှစ်မှာ ဆိုးချက်ကတော့ အဲဒီထက် ပိုတာတွေ ရှိပါသေးသပေါ့ဗျာ။ တစ်ချို့ဟာတွေတော့ ဆင်ဆာငြိတော့ ပြောလို့မရတဲ့အပိုင်းတွေပါတာပေါ့။
ဖိုးကေးလို့ခေါ်တဲ့ င၀န်နဒီ ပြောသလိုတွေပေါ့။
ဒူးယားဆောင်မှာ သတိအရဆုံးက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဆောင်မှူး ဦးဝင်းမြင့်ဗျ။ ကျောင်းသားတွေအပေါ် သူ့ရဲ့ သားသမီး အရင်းလို ဆက်ဆံတာ။ သူ့မှာ သမီးလေး ၁၀ တန်း အရွယ်တစ်ယောက်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားတွေအတွက် မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒူးယားက အင်မတန် မင်္ဂလာ ရှိပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ရက် အင်းယျားအဆောင်သူုလေးရယ်ကို ဖျက်ပြီး ဒူးယားအဆောင်သူလေးရယ် လို့ လုပ်ဆိုတော့ ဆရာ ဦးဝင်းမြင့်ခမျာ အဆောင်ပေါ်တက်လာပြီး တောင်းပန်ရှာတယ်။ ဟေ့ကောင်တွေ ငါ့သမီးကိုတော့ ချမ်းသာပေးပါကွာ တဲ့။
ဆရာဦးဝင်းမြင့်လည်း ဆုံးရှာပြီ။ ဆရာဦးမြင့်ကြွယ်လည်း ဆုံးရှာပါပြီ။ ဆရာတို့တတွေ ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ စက်မှုကျောင်းသားတွေရဲ့ စာကြိုးစားမှုကိုလည်း ပြောမှ ဖြစ်ဦးမှာပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ စက်မှုကျောင်းက ကျောင်းသားတွေ မအိပ်မနေ စာကြိုးစားကြတဲ့ တစ်ချိန်ရှိသဗျ။ အဲဒါကတော့ Private Study ပေးတဲ့အချိန်ပါပဲ။ တစ်နှစ်လုံး အလေတွေ လိုက်ကြပြီးမှ စာကြည့်ချိန်ပေးတဲ့ တစ်ပါတ် ၁၀ ရက်လောက်ကျတော့မှ တော်တော်များများက တွန်းကြတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီအချိန်ဆို စာကြည့်တိုက်ထဲမှာလည်း ကျွန်တော်တို့လို ကောင်တွေချည်းပဲပေါ့။ ည ည ဆိုရင်လည်း ဖဲရိုက်သံတွေ တိတ်၊ အရက်သောက် မူးတဲ့ကောင်လည်း ငြိမ်ပေါ့ဗျာ။ ဂစ်တာတီးချင်တဲ့ကောင်တောင် မတီးရဲဘူး အဲဒီအချိန်ဆို။ ဘေးခန်းက ဆရာ ငတိတွေက ပူညံပူညံ လုပ်မှာစိုးလို့။ ဂစ်တာကိုတောင် ပလပ်ကင်လေးပဲ တီးပြီး အာသာဖြေရတာ အဲဒီအချိန်ဆို။ ပြီးတော့ လူတွေအကုန်လုံးက စာအုပ်နဲ့ မျက်နှာနဲ့ မခွာတမ်းပေါ့။ အိမ်သာတက်ရင်တောင် စာအုပ်ကလေး ဂျိုင်းကြားညှပ်ပြီးတော့ သွားကြတာပေါ့။ အဲဒီလို ကြိုးစားကြတာ။
စာကြွင်း။ သူငယ်ချင်းတို့ မှတ်မိသမျှလေးတွေလည်း ဝေမျှကြပါဦး။ သိပ်လည်း အကုန်မမှတ်မိကြနဲ့နော်။
အိမ်က မိန်းမတွေ ဖတ်မိလို့ ကွာရှင်းစာချုပ်တွေမှာ လက်မှတ် ထိုးနေရမှာစိုးလို့။ ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ချို့ဟာလေးတွေ မေ့ချင်ယောင် ဆောင်ထားတယ်ဗျ။ နောက် တစ်ခေါက်ကျရင်တော့ ကိုစာကလေး တို့နဲ့ စာကြိုးစားခဲ့တာလေးတွေ ထည့်ရေးပါဦးမယ်။
Posted by ကိုသက်ဝင်း at 11:20 AM5comments:
ကျွန်တော် မသိခဲ့တဲ့ ကိုထူးအိမ်သင်ရဲ့ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်
Posted by ကိုသက်ဝင်း at 11:14 AM No comments:
ကျွန်တော့ အသည်းစွဲ ကိုထူးအိမ်သင် ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်....
Posted by ကိုသက်ဝင်း at 2:05 PM No comments:
I like both of this videos. But prefer our legend Htoo Aein Thin who is our Hero for ever.
ထူးအိမ်သင် " ရင်ခွင်ပျောက်သူ "
Posted by ကိုသက်ဝင်း at 1:52 PM No comments:
Posted by ကိုသက်ဝင်း at 10:17 AM No comments:
ဒါ ငါ့အတွက်လို့ ရေရွတ်
ခင်ဗျားကြီး ကျုပ်ကို စောင်းဆိုနေတာလားဗျာ။
ငါ့အတွက်တော့ ဗုံးဆံ ထိသလိုပဲ
သံသရာ အဆုံးထိ မတိုင်ပါဘူး
ဒီနွေကို ကျော်ဖြတ်ခွင့် ပြုပါ။
မိုးနဲ့အတူ မျက်ရည်တွေ ရွာချလိုက်ရင်
ငါ့အနားမှာ ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့အချိန်
နှင်းပုလဲခတာ ဘယ်သူ သိမှာလဲ။
Sex နဲ့ Lust သာ ကမ္ဘာလို့ထင်နေသလား
အသွေးအသားတွေ နဲ့ ထုလုပ်ထားတယ်တဲ့လား
နှလုံးအတုက စီးကျလာတဲ့ သွေးထဲမှာ
ငါ မေတ္တာတွေ အပြည့်အသိပ်ထည့်ထားတယ်
မင်း တစ်ခါလောက် သောက်သုံးကြည့်
လ ကို တွေ့လား
ည ကို တွေ့လား
ဒါမှ မဟုတ် မင်း အမှောင်ကိုပဲ
Posted by ကိုသက်ဝင်း at 11:35 PM2comments:
Posted by ကိုသက်ဝင်း at 11:17 AM2comments:
စာမရေးဖြစ်တာလည်း နည်းနည်းတော့ ကြာသွားတော့ ရေးရမှာ တော်တော်ပျင်းလာတယ်။
ဘယ်က စလို့ ဘာကို ရေးရမှန်းလည်း မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ကိုယ်ပိုင် ဆင်ဆာ နဲ့ ငြိနေတာက များနေတော့။
အလွန်ရိုးသား ဖြူစင်တဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့။ စာကိုပဲ ကြိုးစားပြီးတော့ ကျန်တာတွေဆို ဘာကိုမှ စိတ်မ၀င်စားဘူးတဲ့။
သူ့နာမည်ကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း မောင်သက်ဝင်း လို့ ခေါ်သတဲ့။
သူ့ဘ၀မှာ အကြီးကျယ်ဆုံးပြောင်းလဲသွားတာက သူ့ရဲ့ ၁၀ တန်း စာမေးပွဲကို ကျရှုံးတဲ့အချိန်ပဲတဲ့။ သူ့ဘ၀မှာ ပထမဆုံး ကျရှုံးခြင်းလည်း ဖြစ်တယ်တဲ့။
အဓိက ကျရှုံးရတာက ၀ီရိယ လွန်ကဲမှုကြောင့် ပေါ့။ စာတွေကို အိပ်ချိန်နည်းနည်းပဲ ထားပြီး ကျက်လိုက်တာ ၁၀ တန်းကို ဂုဏ်ထူး ၂ ဘာသာ၊ မြို့နယ်မှာ အမှတ်အများဆုံးနဲ့ ကျရှုံးသတဲ့လေ။
အဲဒီမှာ ကောင်လေးက ပေါက်ကွဲပြီး ၁၀ တန်း ဒုတိယနှစ်မှာ အင်မတန် တေလေပြီးတော့ ဆိုးသွမ်းခဲ့တယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ပထမနှစ်မှာ ပါရမီ ပြည့်ခဲ့တော့ စာမေးပွဲမှာ မြို့နယ် ပထမ အဆင့်အနေနဲ့ပဲ အောင်မြင်ခဲ့သတဲ့။
ကောင်လေးက သူဝါသနာပါတဲ့ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကို ရွေးချယ်မှု အဆင့် ပထမ နဲ့ ဒုတိယတွေ တတိယတွေ မထားပဲ လျှောက်ထားပြီး အဲဒီ စွယ်တော်တွေနဲ့ လှပတဲ့ အင်းစိန် ကြို့ကုန်း က စက်မှုတက္ကသိုလ်ကြီးဆီမှာ ပညာ သင်ကြားခဲ့သတဲ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကျောင်းမှာ သူနာမည် ကျော်တာကတော့ ဖဲအလွန်ရိုက်တဲ့သူဆိုပြီး ကျော်ကြားသတဲ့။ အရက်သောက် ရန်ဖြစ် အဆောင်ရှေ့မှာ မူးမူးနဲ့ သီချင်းသွားအော်ဆို။ အဆောင်မှုးတွေလိုက်ရင် အဆောင်တွေကို ပတ်ပြီးပြေး... အဲဒီလိုနဲ့ပဲ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကနေ ဘွဲ့တစ်ခု ရလာခဲ့တာပေါ့လေ။
အခုတော့ သားကျွေးမှု မယားကျွေးမှုတွေနဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံ သေးသေးလေးတစ်ခုမှာ ရာထူးကြီးကြီးနဲ့ ကုမ္ပဏ္ဏီ သေးသေး တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေရှာသတဲ့။
ဒါပေမယ့် အဲဒီကျွန်းမှာလည်း သူဟာ မလိမ္မာသေးပဲနဲ့ မိုက်တုန်း ရှိနေသေးသတဲ့။
အင်း ဒီလောက်ဆိုရင် နည်းနည်းတော့ အားသာပြေ ရေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။
နောက်ကြုံမှပဲ သမီးစံ ရဲ့ တပ်ဂ် ငယ်ငယ်တုန်းက အမှတ်တရလေးတွေ ထပ်ရေးပါဦးမယ်။
Posted by ကိုသက်ဝင်း at 2:08 PM4comments:
စာရေးဖို့ကို လက်မှာလည်း အားမရှိဘူး
ငါကြိုက်တာက Celine Dion ရဲ့ Lonely
Akon ရဲ့ Lonely နဲ့ အပြိုင်ပေါ့
မင်းတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး တဲ့
ဒါပေမယ့် ငါ မယုံနိုင်ပါဘူးလေ
Good Bye လို့ မပြောခင်မှာ
နှလုံးသားရဲ့ အသံကို နားဆင်ကြည့်
ဒီကြိုးကို ဖြတ်ဖို့ ခွန်းအားတစ်ခု ဖြည့်ပေးခဲ့ပါ။
Posted by ကိုသက်ဝင်း at 11:15 AM2comments:
Labels: စိတ္တဇ ကဗျာ